Ederede nke Terri Mock na Martech Zone |
Edemede site na Terri Mock
Terri Mock bụ Chief Reveue Officer nke Mmekọrịta Ve, onye na-eweta ọrụ mgbasa ozi dijitalụ na ọrụ ahịa karịa 10,000 ụlọ ọrụ e-commerce n'ụwa nile. Mock nwere ihe karịrị afọ iri abụọ nke ahụmịhe dịka onye isi ndị isi, na-elekwasị anya na ịba ụba mmata ego, na -emepụta usoro ịga ahịa na ịbawanye azụmaahịa maka ụlọ ọrụ teknụzụ.
Agbanyeghị na oge opupu ihe ubi ka malitere, ndị na-azụ ahịa na-agbalite ịmalite na mmelite ụlọ ha na oge nhicha, ịghara ịzụrụ ịzụrụ uwe mgbokwasị ọhụrụ na ịlaghachi azụ mgbe ọnwa gachara ezumike ọnwa. Ọchịchọ nke ndị mmadụ ịmaba n'ime ụdị ọrụ mmiri dị iche iche bụ isi ọkwọ ụgbọ ala maka mgbasa ozi mmiri, peeji nke ọdịda na mkpọsa ahịa ndị ọzọ anyị na-ahụ na mbido February. Snow ka nwekwara ike ịdị